I-China yanyanzela ukuba uqhushumbe-ubungqina bebhola yokwenza ulwenziwo kunye nefektri | Yiya
Ibhola yeYoga yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu wePVC. Udonga olungqingqwa olungu-2mm luyakwazi ukumelana nokuxinana kumacala ahlukeneyo. Nokuba ngempazamo uyigqobhoza ibhola, iyoga ayizukugqabhuka, iqinisekisa ukhuseleko lwakho!
Igama lemveliso: I-PVC yeBhola yeBhola
Izinto zeMveliso: PVC
Ubungakanani beMveliso: 25-85cm ububanzi
Umbala: Luhlaza, Luhlaza, Mfusa, Mnyama, Pinki, Bomvu, Mthubi, orenji okanye ulwenziwo
Ibhola yeYoga yenziwe ngezinto ezinobungqina obuphezulu bokuqhushumba, kwaye ivakalelwa ngathi ithambile njengesiponji. Kwangelo xesha, ine-compression ethambileyo kunye nokuthamba kunye nokuqina okuphezulu njengebhola ebalekayo. I-logo ebalaseleyo kwibhola yenza ukuba iimvakalelo zibukeke kwaye zibe zezemidlalo. amandla.
Ubungakanani I-Dia25cm / 45cm / 55cm / 65cm / 75cm / 85cm (Ngokuzithandela)
Luhlaza, Luhlaza, Mthubi, Mnyama, Pinki, Bomvu, Mthubi, o-Orenji kunye nezinye.
Izixhobo zokuzilolonga, umzimba womzimba, ukuthambisa impilo.
Iibhola zeyoga azisetyenziselwa kuphela ukuziqhelanisa neyoga, kodwa neminye imidlalo.
Egqithileyo Ukulolonga ulwenziwo lwevili TPE yoga
Okulandelayo: Ingxowa yeyoga ephathekayo engenamanzi
I-PVC yeBhola yeBhola
ubunzima bomzimba wokuzilolonga
Irabha interlock mat
Ukomelela kokutsiba ngentambo ngokuthengisa
Ingxowa yeYoga yokuHamba, Umgangatho oQinisekileyo wePuzzle, I-Yoga Mat enetawuli ephezulu, Ingxowa yeYoga yeSling, iphazili yomthambo, Ingxowa yeYoga Mat yokuHamba,